Ny vaovao rehetra izay entin'ny fanavaozana 1.5 an'ny PUBG Mobile | Androidsis
Ny vaovao rehetra izay entin'ny PUBG Mobile update 1.5
Aaron Rivas | 10/07/2021 11:39 | Nohavaozina amin'ny 10/07/2021 11:41 | About us, PUBG Mobile
Misy iray fanavaozana vaovao ny PUBG Mobile, ary 1.5 io. Ity dia miaraka amina fanovana mahaliana, vaovao ary fanatsarana marobe, toy ny fihenan'ny faharetan'ny pass de battle sy ny vidiny mitovy, fitaovam-piadiana, fomba sy fiasa vaovao, sns. Ampahafantarinay bebe kokoa ao amin'ny patch patch izy ireo.
Betsaka ny zava-baovao hita, fa etsy ambany dia hamintina ireo zava-dehibe indrindra isika. Toy izany koa, tadidio fa ny fanavaozana dia misy ao amin'ny Play Store ankehitriny, amin'izay ianao afaka manandrana ny vaovao rehetra tafiditra ao amin'ilay lalao.
1 Fomba vaovao
1.1 Nirehitra ny iraka
1.1.1 Fanovana tanteraka
1.1.2 Misionera Ignition lalao manokana rafitra
1.1.3 Basy sy kojakoja fampiasa amin'ny ignition Mission tsy manam-paharoa
1.1.4 Fiara fiaran-dalamby fanendahana iraka vaovao tsy manam-paharoa
1.1.5 Fitaovana fanendahana iraka tsy manam-paharoa
1.1.6 Endri-javatra tsy manam-paharoa amin'ny ignition Mission
1.1.7 Atiny vaovao hafa avy amin'ny Mission Ignition
2 Tesla (9 Jolay-6 Septambra)
2.0.2 Model Y ary mitondra fiara mitokana
3 Basy vaovao sy fanatsarana ny ady
3.1 Basy vaovao MG3
3.2 Fanitsiana ny M249
3.3 Fiantohana ny rafitra fanonerana afo
3.4 Fikirana fakan-tsary an'ny olona fahatelo
3.5 Varavarankely vaovao
3.6 Fanatsarana ny lojika fanaraha-maso default
3.7 Team Deathmatch: Fanatsarana ny Hangar
3.8 Fanitsiana amin'ny EvoGround - Payload 2.0
3.9 Kodiarana haingana vaovao
3.10 Fanjifana azo ovaina vaovao
3.11 Sarivongan'ny fandresena vaovao
3.12 Saripika fandresena vaovao
3.13 Famantarana ammo vaovao sisa tavela
3.14 Sakan'ny angon-drakitra Fahafatesana Vaovao
3.15 Fikirana basy manokana
3.16 Fanamboarana manokana ny fahatsapana ny basy
3.17 Fampandrenesana fandraisana anjara amin'ny ekipa vaovao
6 Eto i Ray!
7 Zava-bita vaovao
8 Fanomezana RP
9 Fanatsarana ny zava-bita fototra
10 Fanatsarana ny faritra fiarovana
11 Fanatsarana ny fiarovana
12 Fanavaozana ny Championship ho an'ny talenta rehetra
13 Fanatsarana ny endrika
14 Fanatsarana ny rafitra
15 Cycle 1 Season 1
15.1 Rafitra teboka fanamby
16 Fanatsarana ny kisary haavo
17 Fanavaozana ny efijery fizaran-taona
18 Fanatsarana ny valisoa amin'ny vanim-potoana
Nirehitra ny iraka
Hita amin'ny 9 Jolay ka hatramin'ny 6 septambra io. Mikasika izany, ny orinasa angovo sy teknolojia DynaHex dia miaina "fanovana teknolojia maharitra" ao Erangel.
DynaHex dia nanova faritra lehibe enina ao Erangel mifototra amin'ny fiarovana ara-tafika, fampiasana angovo, fitaterana sy lozisialy ary fikarohana siantifika farany.
Transit Center (Pochinki taloha)
Pochinki no fototry ny tambajotram-pitaterana Erangel ary lasa foibem-pitaterana eto amin'ny nosy izao.
Seranan'i Georgopol (Georgopol taloha)
Ny tombony azon'i Georgopol amin'ny maha port logistics azy dia hararaotina bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana ivon-komandy foibe vaovao sy trano fitehirizana mandeha ho azy tanteraka.
Tech Center (ilay sekoly taloha)
Ity faritra teo aloha an-tsekoly ity izao dia manome lanja bebe kokoa amin'ny famotopotorana akademika sy fikarohana.
Ivotoerana fiarovana (toby miaramila taloha)
Ny tobin'ny miaramila dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny filaminan'ny nosy iray manontolo sy ny fanomezana fanohanana mitam-piadiana.
Agence Logistics (teo aloha Yasnaya Polyana)
Ny Logistics Agency dia miorina ao Yasnaya Polyana ary ivon-tsinjara lehibe ho an'ny famatsiana tonga ao Erangel.
Ivotoerana angovo (Mylta Power taloha)
Ity fikambanana ity dia manome fahefana an'i Erangel rehetra ary manambatra ny famokarana herinaratra mahazatra amin'ny haitao manara-penitra mba hamokarana tahiry azo antoka ho an'ireo tranobe sivily sy miaramila ao amin'ilay nosy.
Misionera Ignition lalao manokana rafitra
Ny ascenseur, varavarana mandeha ho azy ary sehatra hafa mihetsika hafa dia hiseho amin'ny faritra an-tanàn-dehibe nohatsaraina.
Mba hahomby kokoa amin'ny dia any Erangel, ny Logistics Agency dia nanangana HyperLines tao Erangel hampifandray ireo tanàna maro samihafa eto amin'ny nosy.
Nametraka an'ity fitaovam-pitaterana manokana ity ny Command Center ivelan'ny faritra an-tanàn-dehibe sy toby maromaro hanampiana ireo mpiambina mandeha amin'ny rivotra sy hanao fisafoana eny amin'ny lanitra.
Basy sy kojakoja fampiasa amin'ny ignition Mission tsy manam-paharoa
Basy vaovao: ASM Abakan
Ny ASM Abakan dia mitifitra boribory 5,56mm ary manana fomba fitifirana telo: fipoahana mandeha ho azy roa, tifitra roa ary fitifirana tokana.
Ny kofehy mifikitra dia afaka manatsara ny fitantanana fitaovam-piadiana, manatsara ny fanaraha-maso miverina / mitsivalana ary fanarenana haingana.
Ity fidirana am-bava ity dia afaka mampihena ny fielezan'ny bala sy ny famerenam-bidy.
Ity kojakoja magazine ity dia azo ampiarahina amin'ny basy rehetra ary mampitombo be ny fahaizan'ny magazine amin'ny vidin'ny fotoana famerenana lava kokoa.
Fiara fiaran-dalamby fanendahana iraka vaovao tsy manam-paharoa
Ny môtô amphibious antigravity dia manana toerana 2 ary azo ampiasaina handehanana am-pilaminana manodidina ny sari-tany iray manontolo.
Fitaovana fanendahana iraka tsy manam-paharoa
Fitaovana fanamarihana taktika
Ity lahatsoratra ity dia mandroso ara-teknolojia amin'ny lalao. Raha vantany vao vita, dia manamarika ny toeran'ny fahavalo voadona izy io ary mampiseho ihany koa ny satan'ny ekipa eo amin'ny minimap rehefa mandray anjara izy ireo.
Tsindrio raha hametraka ampinga fikomiana maharitra izay afaka manakana bala rehetra.
Endri-javatra tsy manam-paharoa amin'ny ignition Mission
Fampisehoana Holographic an'ny Spawn Island
Ny efijery holografika iray dia nampidirina tao amin'ny Spawn Island, mampiseho ny sarintany sy ny làlan'ny sidina an'ny lalao ankehitriny, ary koa ireo marika nanamarihan'ny mpilalao.
Mandritra ny dingana sidina sy fitsambikinana, ny mpilalao dia afaka mikitika mivantana amin'ny sari-tany hametrahana marika.
Ireo mpilalao dia afaka mamaky parachute ho azy eo amin'ilay toerana voamarika aorian'ny famelomana ilay endri-javatra.
Atiny vaovao hafa avy amin'ny Mission Ignition
Niampy sary mihetsika sidina ho an'ny balafomanga alohan'ny hipoahan'izy ireo amin'ny fanafihana an'habakabaka mba hahamora kokoa ny mitsara ny toerana hipoahany.
Nanampy fiasa iray hanondroana ny toerana manodidina ny grenady izay hipoaka eo akaikin'ny mpilalao.
Tesla (9 Jolay-6 Septambra)
Hetsika izay hatao mivantana amin'ny 9 Jolay ka hatramin'ny 6 septambra.
Hiseho amin'ny sari-tany ny Tesla Gigafactory. Atsimbadika ny switch rehetra amin'ny tsipika fivoriambe ao amin'ny orinasa mba hanombohana ny fizotran'ny fiara sy ny fananganana fiara Tesla - Model Y.
Model Y ary mitondra fiara mitokana
Fiara mizaka tena novokarina tao Tesla Gigafactory dia manana maody autopilot izay azo ampandehanana eny amin'ny arabe amin'ny sarintany mba hitondrana ho azy ireo mpilalao ho any amin'ny toerana misy ireo marika mialoha eo amoron-dalana.
Ireo fiara fitaterana mahaleo tena novolavolain'i Tesla ireo dia hiseho tampoka eny an-dalambe any an'ala ary mandeha fiara mandeha amin'ny lalana manokana.
Mahazoa fitaovam-piadiana amin'ny alàlan'ny fiatrehana ny fahasimban'ny Semi handao ny Crates famatsian.
Basy vaovao sy fanatsarana ny ady
Basy vaovao MG3
Basy masinina maivana vaovao: Miaraka amin'ny fihodinana 7,62mm, ity fitaovam-piadiana ity dia misy fomba fitifirana tokana, ary ny tahan'ny afo dia azo ovaina amin'ny 660 na 990 isa-minitra, mamela ny fitifirana mitohy sy ny famafazana haingana.
Rehefa ampiasaina amin'ny bipod dia mihena be ny recoil raha mora mitifitra. Tsy miteraka afa-tsy amin'ny Air Drops ity basy ity.
Fanitsiana ny M249
Ankehitriny rehefa nampiana ny airdrops ny MG3, ny M249 dia hesorina amin'ny airdrops ary hiseho amin'ny tany ampitan'ny sari-tany amin'ny maody mahazatra.
Fiantohana ny rafitra fanonerana afo
Nanampy rafitra iray natambatra ho an'ny basy miaraka amin'ny tahan'ny endriny samihafa hamahana ny olan'ny tahan'ny fandefasana basy tsy mitovy rehefa tsy mitovy ny tahan'ny bara.
Fikirana fakan-tsary an'ny olona fahatelo
Nanampy safidy hanitsiana ny sehatry ny fijery TPP.
Ny sehatry ny fijerin'ny TPP dia azo ahitsy amin'ny toe-javatra.
Ity safidy ity dia tsy hihatra amin'ny fitaovana sasany miaraka amin'ny efijery izay efa manana sehatra fijery lehibe.
Niampy tranobe sasany tao Erangel sy Miramar ny fitaratra.
Azo vaky ny fitaratra amin'ny alàlan'ny fanafihana an-tsokosoko, fitifirana, na fiakarana amin'ny varavarankely, ary hitabataba izany rehefa potipotika, saingy tsy hiverina intsony aorian'ny vaky.
Fanatsarana ny lojika fanaraha-maso default
Ho foana ny fakana automatique rehefa mampiasa fanafody ny olona iray.
Raha misy fitaovam-piadiana alaina rehefa olona efa manana fitaovam-piadiana voalohany, ny fitaovam-piadiana melee dia ho voavonjy amin'ny toerana misy anao.
Rehefa tsy manana Mofo ny toetra amam-panahy, dia hanangona sy hampitaovana mofo iray azy ny mpandray anjara.
Raha lany ny ammoam-basy (ao anatin'izany ny ammo amboaram-bidy) ary misy fitaovam-piadiana hafa mbola manana ammo dia hivadika ho azy io ilay mpilalao.
Basy mirehitra tsy misy ammo dia tsy ho tonga tampoka.
Team Deathmatch: Fanatsarana ny Hangar
Nohatsaraina ny fandrakofana manakaiky ny teboka zana-kazo mane saika hahatratra ny haavon'ny tampon'ilay fitoeram-boankazo.
Nanatsara ny haben'ny minimap mba hahamora ny fandinihana ny toe-draharaha ady.
Fanitsiana amin'ny EvoGround - Payload 2.0
Nilaza i Tencent fa hampiakatra bebe kokoa ny EvoGround - Payload 2.0 hanatsara azy bebe kokoa noho ny hatramin'izay.
Kodiarana haingana vaovao
Ny kodiarana entana azo ovaina sy azo ovaina dia nampiana mba hanamorana ny fampiasana ireo zavatra azo fampiasa sy azo atsipy.
Alefaso ny sary azo ampiasaina / azo ampiasaina hanokafana ny kodiarana sy hanovana na hampiasana zavatra.
Azonao atao ny mampandeha ny asan'ny Quick Throw ao amin'ny menio fanovana. Aorian'ny famelana azy dia tsindrio ary tazomy ilay kisary Throwable hampiasa Quick Throw.
Azonao atao ny mampandeha ny asan'ny Quick Wheel Throw ao amin'ny menio fikirana. Aorian'ny famelana azy dia ahodino ny kodiarana ary safidio haingana ilay tanjona azo atsipy handehana haingana.
Fanjifana azo ovaina vaovao
Ny mpilalao dia afaka mandatsaka ireo zava-mahadomelina entin'izy ireo amin'ny banga. Ny fanafody izay nariana dia azo angonina.
Sarivongan'ny fandresena vaovao
Aorian'ny fandresena dia azonao atao ny miantso sarivongana hankalazana.
Ny MVP an'ny ekipa mpandresy dia afaka miantso volo fandresena amin'ny toerana manokana.
Emotes Fankalazana Manokana dia azo ampiasaina eo akaikin'ny Statue Victory.
Saripika fandresena vaovao
Aorian'ny fandresena amin'ny maody mahazatra dia azonao atao ny miditra amin'ny Photo Mode.
Azonao atao ny misafidy ny hanafina na haneho ny mombamomba ny ekipa amin'ny maody Photo.
Azonao zaraina ny sarinao aorian'ny fakana azy ireo.
Famantarana ammo vaovao sisa tavela
Isaky ny foana ny magazine, dia hiova loko ny isa manondro ny ammo sisa:
Rehefa manana ammozy 25% ianao dia ho mavo ny isa.
Rehefa manana ammozy 10 isan-jato sisa ianao, dia ho mena ny isa.
Sakan'ny angon-drakitra Fahafatesana Vaovao
Rehefa milalao ny Death Replay dia afaka mahita fampahalalana ampahibemaso momba ny mpilalao mamafa anao.
Ao amin'ny angon-drakitra, azo atao izao ny mahita angon-drakitra mifandraika amin'ny maha-marina ny fitifirana, ao anatin'izany ny impiry no nokapohan'ny mpilalao ny mpanohitra azy, ary koa impiry no namely ilay mpilalao ilay mpanohitra.
Niampy fiasa ho an'ny tatitra.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny fahafatesana dia azo alefa na tsy mandeha ao amin'ny fikirana.
Fikirana basy manokana
Ny mpilalao dia afaka manamboatra kojakoja ho an'ny basy tsirairay ary mametraka kojakoja kendrena samihafa ho an'ny slot samihafa.
Raha vantany vao voalamina ny fikirana, dia hanangona sy hampitaovana ireo kojakoja azy ireo ny tarehin-tsoratra rehefa hitany izy ireo.
Fanamboarana manokana ny fahatsapana ny basy
Ny mpilalao dia afaka manamboatra ny fanaingoana ny fahatsapana manokana ho an'ny basy tsirairay, izay hampiharina rehefa mampiasa ny basy mifanentana aminy.
Fampandrenesana fandraisana anjara amin'ny ekipa vaovao
Rehefa misy ady ny ekipa iray ka simba, dia hisy fampandrenesana hiseho manodidina ny tobim-pahasalamana ho an'ny mpiara-miasa aminy mba hampisehoana fa miady izy ireo.
Ny Royale Pass amin'ity indray mitoraka ity dia miatrika fiovana lehibe, satria hisy roa mandritra ny patch. Ireo dia:
Royale Pass volana voalohany: Tek Era (14 Jolay hatramin'ny 12 Aogositra)
Royale Pass volana voalohany: Tetikasa T (13 aogositra hatramin'ny 13 septambra)
Rehefa tapitra ny RP S19, ny Royale Pass dia ahitsy amin'ny volana an'ny Royale Pass, ary ny mpilalao dia afaka mangataka fanomezana ankasitrahana manokana rehefa avy niditra voalohany.
Fikirana ora: Nanitsy ny faharetan'ny RP iray volana, ary ny 2 RP dia halefa mifanesy isaky ny kinova. Hivoaka amin'ity kinova ity ny RP M1 sy ny RP M2.
Fanitsiana ny vidiny: Nanitsy ny vidin'ny RP mahazatra tamin'ny 360 CU ary ny vidin'ny Elite RP hatramin'ny 960 CU (isa 1200 bonus).
Fihenan'ny ambaratonga: nanitsy ny laharana max ho 50 nefa tsy nanova ny kalitaon'ny valisoa. Mahatratra ny laharana 50 hahazoana ny Mythic Set ary hahazo fitaovam-piadiana Legendary sy Set ao amin'ny laharana 1.
Valisoa fanampiny: Afaka mahazo valisoa maimaimpoana ny mpilalao raha mbola mahazo laharana RP izy ireo.
Mission setting: Nampihena ny faharetan'ny iraky ny fanamby RP manomboka amin'ny 8 herinandro ka hatramin'ny 4 herinandro, mampihena ny takiana amin'ny fotoana filalaovana RP amin'ny fotoana iray.
Tweaks hafa: nanitsy ny vidin'ny fahazoan-dàlana EZ Mission, nanampy tabila iray volana Royale Pass, sns.
Ampahafantaro ny Clan Battle, fomba iray izay ahafahan'ny mpianakavy mitovy karazana sy haavon'ny hetsika miady amin'ny ady 14 andro.
Ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana dia afaka mamita ny iraka ataon'ny Clan Battle mba hahazoana Shock Points sy ny valisoa isan'andro.
Alohan'ny hifaranan'ny hetsika dia mandresy amin'ny adim-poko amin'ity vanim-potoana ity ny fianakaviambe miaraka amin'ny valisoa lehibe indrindra.
Samy mitondra valisoa mahafinaritra ny fandresen'ny foko sy ny fandraisan'anjaran'ny tsirairay.
Eto i Ray!
Fampisehoana vaovao iray vaovao, eto i Ray hitazona anao hanavao ny zava-dehibe rehetra.
Fahombiazana amin'ny lohahevitra vaovao: Ny mahita dia Mino (manokana), azo raisina amin'ny fandraisana anjara amin'ny Mission Ignition ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny 6 Jolay ka hatramin'ny 6 septambra.
Fahombiazana vaovao: Season Veteran (manokana), azo alohan'ny 13 septambra raha mbola any rehefa miova ny vanim-potoana Royale Pass.
Fahombiazana vaovao: Fikirizana, izay azo raisina amin'ny fandraisana anjara amin'ny All Talent Weekly Championship.
Fahombiazana vaovao: Irresistible, izay azo raisina amin'ny fanajana ny RP amin'ny lalao iray.
Fahombiazana vaovao: Critical, izay azo raisina amin'ny famitana lalao sy fanamarihana mpiara-miasa.
Mametraha zava-bita amin'ireo kintana ary i Neon Punk dia hiverina mandritra ny fotoana voafetra, izay hesorina mandrakizay taty aoriana.
RP Perk vaovao: ny fahaizana maneho fanajana amin'ny lalao. Ny mpilalao dia afaka manaja ny mpiara-miasa amin'ny fotoana rehetra mandritra ny lalao iray, ary ny hafatra fanajana dia haseho amin'ny tantaran'ny chat.
Ireo mpilalao nahazo fanajana dia afaka mahazo isa RP maromaro.
Fanatsarana ny zava-bita fototra
Fanohanana sy fanatsarana IBL hanomezana valin-jiro azo tanterahina bebe kokoa amin'ny sari-tany ary hanatsara ny fanavahana eo anelanelan'ny firafitra.
Fanohanana ny fanaparitahana hazavana eny amin'ny habakabaka, ao anatin'izany ny fanaparitahana an'i Rayleigh, ny fiparitahan'ny Mie, ny zavona amin'ny atmosfera ary ny vokany hafa, mba hampamirapiratra sy hitombina kokoa ny lanitra.
Fanohanana ireo vokatra maitso manankarena, rahona mavitrika, vokarin'ny jiro rahona simika azo tsapain-tanana, sns.
Fanatsarana ny faritra fiarovana
Tencent dia nanampy votoaty hetsika mahaliana kokoa sy valisoa lehibe ho an'ny Security Zone - Video Review, ary koa fanatsarana bebe kokoa ny fizotry ny fizahana horonantsary sy ny traikefa amin'ny asa.
Nanampy efijery hetsika hahamora ny fizahana ny atin'ny hetsika.
Hetsika fandraisana mpiasa: Ny valisoa manokana dia azo angonina rehefa misy mpandinika horonantsary maromaro.
Asa fitoriana isan'andro: ireo mpandinika horonantsary dia afaka mamoha andiana iraka fanaraha-maso ary manangona valisoa.
Ny valisoa maharitra fanampiny, toy ny akanjo maharitra, frame avatar, sns., Dia nampiana mba hamporisihana sy hanohanana ny mpilalao hanohy hiady amin'ny hosoka sy mpamitaka.
Fanatsarana ny fiarovana
Fanatsarana stratejika bebe kokoa hikendrena ny fanesorana ny ahitra, ny fihoaram-pefy, ny fahitana taratra X, ny tanjon'ny fiara ary ny fiakaran'ny haingam-pandeha.
Ezaka manatsara ny fisorohana ny fahasimban'ny loharano samihafa.
Tohizo ny fanamafisana ny fiarovana anao amin'ny fanafihana tambajotra isan-karazany.
Fanavaozana ny Championship ho an'ny talenta rehetra
Ireo laharam-paritra vao nampiana dia tsy miankina amin'ny filaharana Tompondakan'ny All-Talent.
Ireo mpilalao mandray anjara amin'ny lalao 1 farafahakeliny isan-kerinandro dia ho voasokajy ao amin'ny faritra misy azy ireo mandritra io herinandro io.
Ny ekipa dia hiditra amin'ny solaitrabe mpitarika faritra rehefa vita ny lalao. Ny laharana isaky ny faritra dia tsy miankina amin'ny tsirairay.
Aorian'ny fiafaran'ny herinandro isan-kerinandro dia afaka manangona valisoa miorina amin'ny laharan'ny ekipany ao amin'ny faritra misy azy ireo ny mpilalao mandritra io herinandro io.
Ny mpilalao dia afaka mangataka valisoa lalao mavitrika mifototra amin'ny isan'ny lalao lalaovin'izy ireo amin'ny Weekly Matches isan-kerinandro.
Ny angona isaky ny lalao isan-kerinandro sy ny fahazoana valisoa dia havaozina isan-kerinandro.
Lohateny sy zava-bita vaovao no nampiana ho an'ny Tompondakan'ny talenta rehetra.
Fanatsarana ny endrika
Fanatsarana ny marika manerantany
Namboariny kely ny familiana ny kodiarana. Ny familiana sy ny fanaingoana azy dia nijanona ho toy izany hatrany amin'ny kodiarana feo.
Fanatsarana ny fotoana fandresena
Namboarina ny fotoana ahafahan'ny mpilalao mijanona amin'ny ady rehefa mandresy hatramin'ny 60 segondra.
Fikirakirana UI Battle
Namboarina ny fomban'ny bokotra fiasa ambany. Nanao fanitsiana madinidinika tamin'ny fika fanaingoana ny bokotra Settings, Voice, Graffiti, ary Emote.
Fanatsarana lojika mampiseho ny Death Crate
Rehefa manangona boaty fahafatesan'ny mpilalao iray hafa amin'ny lalao ny mpilalao, aorian'ny niovan'ny takelaka enina metatra toradroa sy ny endrika takelaka sivy toradroa an'ny boaty, dia hotsaroana izany ka tsy mila ovaina intsony izy ireo.
Ny mpilalao dia afaka manamboatra ny fahatsapana ny gyroscope rehefa mikendry fitaovam-piadiana.
Nanisy switch iray hametrahana inversion amin'ny gyroscope. Raha vantany vao afaka io setting io dia hikorisa / hidina ho an'ny gyro.
90 FPS dia misy amin'ny sary milamina ho an'ny fitaovana vaovao sasany.
Fanatsarana ny rafitra
Fanatsarana ny sora-baventy lobi
Ny sora-baventy eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny Lobby dia afaka misosa amin'ny hafainganam-pandeha hafa amin'ilay fanavaozana 1.5 vaovao.
Fanatsarana ny efijery valisoa
Nihatsara ny efijery izay anolorana valisoa anao. Nisy vokany nanjavona bokotra mba hanakanana ireo mpampiasa tsy hikendry haingana loatra ary tsy nahatratra ny efijery.
Nohatsaraina ny fanadihadiana momba ny ady. Afaka manome naoty, misafidy tag ary manome valin-kafatra ho an'ny namany ny mpilalao ankehitriny.
Manatsara ny fampahalalana amin'ny efijery lehibe
Ny mpilalao sasany dia nanana olana tamin'ny fahazoana ny interface interface ekipa lehibe satria tsy nampiseho fampahalalana am-pahibemaso. Namboarina izao.
Ny fampidirana ny fiasan'ny Vehicle sy X-Suit dia novaina.
Fanatsarana ny lalao tianao amin'ny lalao
Ny tiana amin'ny fiandohan'ny lalao iray na rehefa mandresy dia mampiseho ny fandrosoan'ny Likes an'ny ekipa sy ny vokatra tiany manokana.
Rafitra teboka fanamby
Ny rafitry ny teboka fanamby dia fitsipika iray hafa ampiasaina hanombanana ny hetsiky ny mpilalao amin'ny lalao nefa tsy fanovana ny lalàna momba ny isa voalohany.
Makà teboka fanamby bonus raha tsy miala amin'ny lalao ianao dia resy na esory ny mpiara-miasa aminao amin'ny lalao iray manontolo.
Raha resy ny mpilalao iray raha manana Points Points izy ireo dia ho very isa avy hatrany amin'ny ambaratonga misy azy ireo.
Ny teboka fanamby fanampiny dia omena amin'ny famitana ny lalao voalohany isan'andro.
Ny teboka fanamby dia tsy azo angonina raha vao tafakatra ny be indrindra.
Ny isa momba ny fanamby dia isa isaina arakaraka ny lohan'ny mpizara sy lalao.
Ny Points Challenge dia tsy hitondra any amin'ny vanim-potoana hafa.
Fanatsarana ny kisary haavo
Ny fampisehoana ireo kisary haavo dia nohavaozina mba hampanan-karena ny antsipirihany.
Manatsara ny fiakaran'ny vokatra avo lenta.
Fanavaozana ny efijery fizaran-taona
Ny fanolorana ny fampahalalana eo amin'ny efijery Season dia namboarina.
Ny tsipika fitomboan'ny valisoa sy ny fandrosoan'ny namana dia nampiana.
Namboarina ny fomba fanolorana valisoa.
Nohavaozina ny efijery valim-pitia.
Fanatsarana ny valisoa amin'ny vanim-potoana
Valim-pifidianana volafotsy nampiana tamin'ny fanavaozana.
Niampy valisoa ho an'ny Ace Ace taorian'ny fizarana ny ambaratonga.
Nampitombo ny habetsahan'ny valisoa ho an'ny mini level.
Zarao amin'ny ambaratonga manokana ny haavon'ny Ace.
Nanisy valisoa sy safidy fizarana ho an'ny ambaratonga mizarazara amin'ny sehatra Ace.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny vaovao rehetra izay entin'ny PUBG Mobile update 1.5
Ny fampiharana 6 tsara indrindra handikana feo amin'ny lahatsoratra
Ny lalao ping pong 6 tsara indrindra ho an'ny Android